नेकपामा फेरि भाँडभैलो :यी ४ भाईले घेरा हाले ओलीलाई, अब के होला ? – Nepal Online Khabar
काठमाडौ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र फेरी विवादको आगो सल्किने संकेत देखिएको छ । केहीदिन अघि मात्रै साम्य भएको वि’वाद फेरी सतहमा आउने देखिएको छ ।
आइतबार आफ्नै दलका सांसदहरुले दलका नेतामाथि अविश्वासको प्रश्ताव ल्याएपछि यस्तो संकेत देखिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरु’द्धको अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाभित्र फेरी वि’वाद आउने देखिएको हो । मुख्यमन्त्री शाही प्रचण्ड निकट हुन् भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने यामलाल कँडेल अर्का प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् ।
यस घटनाले फेरी ओली र प्रचण्डबीचको वि’वाद तात्ने राजनितिक बिश्लेषकहरुको ठम्याक्ष् छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीबीचको टक’रावको कम्पन कर्णालीमा पुगेको छ । यस घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुनर्ग’ठनमा पार्टीभित्र पेलेरै अगाडी बढ्ने डिजाइन बनाएको विज्ञहरुको दाबी छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीभित्र समन्वय गरेर गर्ने भनेपछि ओलीले सं’कट टरेलगत्तै राजदूत नियुक्तिलगायतमा एकलौटी गरेको भन्दै प्रचण्डलगायतका नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यसलाई ओलीले बेवास्ता गरिदिए । मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा पनि ओलीले आफ्नै चाहना बढी देखाउन थाले ।
यतिसम्मकी प्रचण्ड पक्षधर रहेर उनीबाट असन्तुष्टलाई सरकारमा मन्त्री बनाउन खोजे । यसले प्रचण्ड झस्किए । लगत्तै उनले नेकपाका व’रिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका अलावा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग परामर्श गरे ।
गौतम पनि ओलीसँग फेरि अस’न्तुष्ट भए । छ बुँदे ल्याएर संकट टारेको तर आफैलाई समस्यामा पारेको बुझाईपछि उनी पुरानै मो’र्चा ब्युताउन सक्रिय भएको बुझिएको छ । विगतमा सचिवालयका छ जनाको मोर्चा’बन्दी रहेकोमा यसपटक रामबहादुर थापा बादल घटेर पाँचजना बनेको छ ।
यो समूहले पछिल्लोपटक ग’म्भीर छलफल समेत गरेको छ । नेकपा सचिवालयका पाँचजनाको मो’र्चाबन्दीको भेउ पाएर ओलीले पेलेरै जाने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । यसको संकेत महेन्द्रबहादुर शाहीविरु’द्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापत्र सार्वजनिक भएबाट मिलेको छ ।
नेकपाभित्र अब ओलीवि’रुद्ध प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, बामदेव र नारायणकाजीको मोर्चाको टक’राव फेरि बढ्ने देखिएको छ । यो समूहले यसपटक फेरि रणनीति बनाएको र ओलीलाई चुनौ’ती दिने तयारी गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओली भने अब पेलेरै जाने तयारीका साथ प्रस्तुत भएका छन् । यसले नेकपाभित्र नयाँ संक’ट देखिएको छ ।पाथीभरा डेलि बाट
Prevसुनको विमानमा उड्ने मलेसियाली राजाकी राजकुमारीले गरिन् कामदारसँग विवाह…हेर्नुहोस् ।
Nextखाना खाए लगत्तै ब्रस गर्ने बानी छ ? आजैबाट छोड्नुहोस्…हेर्नुहोस् यस्ता छन असरहरु !